100G / 200G Inowirirana Optical Module | GIGALight
Svitsa kusvika pa120km, 600km, kana 1200km
Yakanaka Solution yeMetro / Yakareba-dhonza & DCI
Chibatanidza bhajeti, chinongedzo, uye zvinotapira zvinodii senge chiyero che data, kunonoka, uye kuchengetedzwa nezvimwe zvinogona kugadzirwa.
Nei Coherent Optics
Pamusoro-kuwana pfumbamwe-chisarudzo FEC inoita kuti zviratidzo zviyambuke marefu mashomanana pavanenge vachida kuderedzwa zvishoma. Inopa huwandu hwakawanda, zvichibvumira zviratidzo zvakaderera zvishoma kuti zviyambuke kure.
Kugadzirwa kwemavara kunopa hukuru hukuru kune dzimwe nzvimbo dzakatarisa ROADM, zvichiita kuti kuwedzerwa kwechirongwa chepamusoro chepamusoro-soro. Kugadzirwa kwemavara kunokosha mukugadzirisa grid system nokuti inobvumira vatakuri kuti vadzidziswe pamwe pamwe kuti vawedzere simba.
Nekugadzirisa zvirongwa, teknolojia inokwanisa kugadziriswa kune zvakasiyana-siyana zvemasetero uye kushandiswa uye inokwanisa kutsigira maitiro akawanda ekugadzirisa mafungiro uye / kana kusiyana kwehuwandu hwehudhi, zvichiita kuti vashandi vasarudze kubva pamhando dzakasiyana dzemitengo.